Faankishinii herreegaa - LibreOffice Help
=JIJJIIRI(100;"ATS";"EUR") Gatii Yuuroo Shilingoota Oostriyaa 100 deebisa.
=CONVERT(100;"EUR";"DEM") Yuuroota 100 gara Maarkoota Jarmaniitti jijjiira.
Moodiin gatii filannooti. Yoo Moodiin kennamee fi zeeroo yoo hin taane, fi yoo lakkoofsi fi siignifikaansiin negatiivii ta'an, siiqsuun gatsirrii lakkoofsaa irratti hundaa'udhaan taasifama.
Yoo lakkoofsi jijjiiramaa fi siignifikaansiin lachuu negatiifii ta'an fi gatiin moodii zeeroodhaan walqixa ta'an ykn yoo hin kennamne,firiin %[officename] calc fi Excel adda ta'a edda alerguu dhumeen booda.Yoo wardii gara Excelitti alerginu,firii walfakkaatu EXseelii calc keessatti ilaaluuf, Moodii=1 fayyadami.
Man'eewwan duuwwaa deebisa.
Lakkoofsa man'eewwan duuwwaa hammangaa man'ee keessa jiranii deebisa.Range.
=COUNTBLANK(A1:B2) Yoo man'eewwan A1, A2, B1, and B2 duuwwaa ta'an 4 deebisa.
Firiin argamu hirmaataa walii guddicha lakkoofsota tarreeffamanii ta'a.
Faankishinii maqaan isaanii _ADD wajjin dhumu firii wal fakkaatu kan Micro Excel wajjin walgitu deebisa. Firii sadarkaa addunyaa irratti hundaa'e argachuuf faankishinii _ADD ala ta'e fayyadamaa. Fakkeenyaaf,faankishiniin WEEKNUM sadarkaa addunyaa ISO 6801 irratti hundaa'udhaan lakkoofsa torbanii kan guyyaa kennamee shallaga, WEEKNUM_ADD ammoo lakkoofsa torbanii walfakkaatu akka Microsoft Exseelitti deebisa.
=GCD_ADD(5;15;25) 5 deebsa.
Faankishiniin kun lakkoofsa tasaa haaraa yeroo hunda calc deebisee shallagu oomisha. Calc akka deebisee shallagu dirqisiisuuf hujeeka shift+Ctrl+F9 dhiibi.
Firiin argamu hiramaa walii xiqqicha lakkoofsota tarreeffamanii ta'a.
=HWX_ADD(5;15;25) 75 deebisa.
Moodiin gatii diirqalaati.Yoo gatiin moodii kenname fi zeeroodhaan walqixa hin taane,fi yoo lakkoofsi fi siignifikaansiin negatiivii ta'an,gatsirrii lakkoofsaa irratti hundaa'udhaan siiqsuun ta'a.Jijjiiramaan kun akka Excel tti gara MS Excel yeroo alergamu irradarbama,jijjiiramaa sadaffaa hin beeku.
Yoo lakkoofsi jijjiiramaa fi siignifikaansiin lachuu negatiifii ta'an fi gatiin moodii zeeroodhaan walqixa ta'an ykn yoo hin kennamne,firiin %[officename] fi Exseeliin adda ta'a edda alaaguun dhumeen booda.Yoo wardii gara Exseelitti alerginu,firii walfakkaatu EXseelii calc keessatti ilaaluuf, Moodii=1 fayyadami.
Faaktooriyaalii ida'amaa qoccolloo baay'ataa faaktooriyaalitiif hirame deebise.
QUOTIENT tiin INT(irrayyee/jaloo) waliin walgita, garuu dogogoraa coodii dogogoraa karaa adda ta'een rippoortii godha.
Lakkoofsa man'eewwanii kan ulaagaa wayii hammangaa man'ee keessaa waliin wal qabatu deebisa.
Ulaagaan, ulaagaa akka unka lakkoofsaatti, himamsaatti ykn diraa arfiitti mul'isa. Ulaagaan kun man'eewwan kamtu akka lakkaa'amu murteessa. Akka himamsa idileetti barruu barbaachaa, fkf b.* jechoota hundaa b dhaan jalqaban galchuu dandeessa. Akkasumas, hammangaa man'ee kan ulaagaa barbaachaa of keessaa qabu agarsiisuu dandeessa. Yoo barruu harjifaatiif barbaadde, barruu waraabbii lamaan cufi.
A1:A10 hammangaa man'ee lakkoofsotaa 2000 hanga 2009 of keessaa qaba. Man'ee B1 lakkoofsa 2006 of keessaa qaba. Man'ee B2 keessa, foormulaa galchita:
=COUNTIF(A1:A10;2006) - kuni 1 deebisa
=COUNTIF(A1:A10;B1) - kuni 1 deebisa
=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - kuni 4 deebisa
=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - yoo B1 qabaate 2006, kuni 6 deebisa
=COUNTIF(A1:A10;C2) iddoo man'een C2 barruu >2006 lakkoofsa man'eewwanii hammangaa A1:A10 keessaa lakkaa'u kan >2006 ta'u of keessaa qaba.
Lakkoofsota negatiivii qofa lakkaa'uuf: =COUNTIF(A1:A10;"<0")
Kana akka foormulaa waraantootti galchuuf, foormulaa cufuus salphumatti furtuu Enter dhiibuu irra Shift+ Ctrl + Enter dirqama dhiibuu qabda. Foormulaan Foormulaa baarii kan cuftuu keessatti cufame keessatti agarsiifama.
Kasaa faankishinii Fankishinii
Hammangaa man'ee A1:B5 magaalota tarjaa A keessa fi fakkiiwwan waliin deeman tarjaa B keessa kan qabate gabatee qabaachuu qabna. Ofmaacalalamaa fayyadamte kanaaf tarree magaala Hamburgii qofa qabu argita. Ida'ama fakkaawwanii kan mul'ate arguu barbaaddaa; kunis, hundam hundaa kan tarree calalamee ta'a. As keessatti foormulaa sirrii kan ta'uu qabu:
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.4/Calc/Mathematical_Functions/om&oldid=1113996"
This page was last edited 21:26:26, 2015-05-06 by LibreOffice Help user WikiSysop.